Fahafatesana tampoka :: Zandary iray maty nilatsaham-potaka • AoRaha
Fahafatesana tampoka Zandary iray maty nilatsaham-potaka
Very namana iray ny Zandarimaria ao amin’ny Borigadin’ny zandary any Ivato Centre, Ambositra. Namoy ny ainy ny lehilahy iray, efapolo taona, mitondra ny grady zandary Kilasy ambony voalaza fa nilatsahan’ ny varatra, ny alin’ny talata tokony ho tamin’ny sivy ora. Tany am-pamitana iraka izy no izao tra-doza tampoka izao.
Nisy oram-be tany amin’iny faritra Ivato Centre iny, nanomboka afak’omaly tolakandro hatramin’ny alina. Nalefan’ny lehibeny hisahana fiambenana an’ireo fiara sy taksiborosy mandalo eny amin’ny lalam-pirenena fahafito ny zandary telo lahy avy ao Ivato Centre, tamin’io alina io.
Tonga teo amin’ny toerana handraisana ny fiara hiarahana ireo zandary no nitranga ny loza. «Teo am-pivoahana ny tranokely nialofany ny zandary iray no nirefotra indray mandeha ny varatra. Nidaraboka tamin’ny tany izy. Fantatra fa nisy lehilahy iray hafa mpamily mpanampy amina kamiao iray nifanakaiky taminy teo, naratra nilatsaham- potaka ihany koa. Zandary iray hafa indray naratra teo amin’ny lohalika», araka ny fanazavana voaray. Nobataina haingana noentina tany amin’ny hôpitaliben’Ambositra ilay zandary kilasy ambony. Tsy nisy azo natao intsony anefa nanavotana ny ainy. Namela kamboty telo ity zandary namoy ny ainy ity. Noentina any Alakamisy Itenina ny nofo mangatsiakany.
Rongony efajato kilao
Fahafatesana tsy namela nahazo :: Zazalahikely nifandimbiasan’ny afo sy ny rano novonoina